Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana an'i Pablo Picasso | Alexandra Nechita: Ny fomba fiainam-piainana taloha sy talenta taloha - Reincarnation fikarohana
Notohanana tamin'ny: Fanampiana avy amin'ny Fanahy na Fanahy Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw, 2005
Alexandra Nechita ho an'i Pablo Picasso Reborn
Nentina teo am-piheverana tamin'ny fomba mahazatra aho ity raharaha ity. Raha ny tena izy, ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Pablo Picasso dia miharihary loatra, ka saika voavaha ny tenany. Avelao aho hanazava ny fomba Picasso | Nivoatra ny raharaha Nechita.
Tamin'ny fahavaratry ny 2004 dia nanao fampisehoana vatana vaovao tao Boulder, Colorado aho. Ny mpikambana iray tamin'ny mpanatrika dia naman'i Wayne Peterson, diplomatika amerikana misotro ronono ary talen'ny Fulbright Programme Program tany Washington, DC, izay nihaona tamin'ny filoham-pirenena amerikana efatra: Kennedy, Johnson, Nixon ary Clinton. Ny raharahan'i Atoa Peterson momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia azo dinihina amin'ny: Ny fiainan'ny fiainan'i Wayne Peterson: Diplomat, Artist, Socialite ary Doge
Nilaza tamiko ny naman'i Wayne fa tokony hanadihady tanora mpanakanto antsoina hoe Alexandra Nechita aho, satria ny asany dia mitovy amin'ny an'i Picasso ary novinavinaina fa izy angamba no teraka tao amin'ny vatana vaovao naterak'i Picasso. Notoroana hevitra aho fa ny asan'i Alexandra dia naseho tao Denver, tamin'izany fotoana izany, tamin'ny Gallery M.
Ny ampitson'io, dia nitondra fiara aho hahita ny asan'i Alexandra ary nahatsapa ny tenako. Na dia nahatsikaritra aza aho fa ny fomba amam-pitenenana fiteny dia afaka mitoetra ho toy izany hatrany amin'ny fitomboan'ny voary, toy ny amin'ny tranga John B. Gordon Jeff Keene, ity no fotoana voalohany nahitako ny fahitana ny talenta azon'ny mpanao hosodoko resahina amin'ny fomba manaitra toy izany. Taty aoriana, ho hitako ny fomba azo anaovana tahaka ny talenta ara-javakanto ary na dia ny famoronana Ny Trangam-panjakan'Andriamanitra any Golgota Peter Teekamp
Na dia tsy manam-pahaizana momba ny zavakanto aza aho, dia toa an'i Picasso ihany ny asan'i Alexandra, nahavariana tsotra fotsiny izany. Nanontany ny talen'ny Gallery M na misy sary avy amin'i Alexandra izay azo alaina, angamba amin'ny bokikely na karatra fandraharahana, ary raha afaka mahazo vaovao mifandraika amin'i Alexandra aho. Nanazava tamiko ny talen'ny galeria fa tsy misy sarin'i Alexandra ary ny mpanakanto dia olona tsy miankina ary tsy afaka omena fampitam-baovao ny fifandraisana. Nandritra ny fivoriana manaraka nataoko niaraka tamin'i Kevin Ryerson, nanontany an'i Ahtun Re aho raha toa i Alexandra dia ny vatana vaovao indray ao Picasso, izay nanamafisany.
Tamin'ny Janoary 2006, raha nanomana ny hamoaka aho ateraka indray, tao amin'ny aterineto, hitako fa manana tranonkala misy sariny i Alexandra ankehitriny. Nampitaha haingana ny endriny amin'ny endriky ny Picasso aho ary na dia tsy nitovitovitra toy ny lalao sasany aza aho, dia tsapako fa mifanaraka amin'ny an'ny Picasso ny endriky ny endriny. Na dia tovovavy tsara tarehy aza i Alexandra, ary tsara tarehy i Picasso, dia nihevi-tena tamim-pahamalinana izy, ny taolam-paty, ny rafitra manontolo amin'ny tarehy sy ny loha, hitako fa mitovy. Taty aoriana dia nahita sarin'i Picasso sy Alexandra aho fony izy ireo nitera-bady, izay ahitàna koa ny fitoviana amin'ny endriky ny endrika. Tamin'ity fotoana ity, nanapa-kevitra ny hanandrana hifandray amin'i Alexandra aho noho ny fampidirany ato amin'ity boky ity. Tsy dia fantatro loatra fa efa tao an-tsainy ilay foto-pinoana vaovao momba ny vatana vaovao indray.
Pablo Picasso ho mpanakanto malaza
Andeha isika handinika fohifohy ny tantaran'i Pablo Picasso sy Alexander Nechita. Picasso Teraka tany Malaga, Espagne, tamin'ny 25 1881 tamin'ny Oktobra. Picasso dia nanolotra fanomezana ara-javakanto tany am-piandohan'ny fahatanorany ary tamin'ny taona 15, dia nisoratra anarana tao amin'ny Sekolin'i Fine Arts any Barcelone izy. Ny sariny, Siansa sy fiantrana, nahazo medaly volamena tamin'ny fampiratiana tao Malaga fony izy 16 ary tamin'io fotoana io, Picasso dia nanana ny trano-tenany manokana tao Barcelona.
Tao amin'ny 1900, Picasso nanao dia fohy nankany Paris, izay nahitàny ny asan'ny mpanakanto maoderina toa an'i Edgar Degas sy Henri Toulouse-Lautrec. Nifindra tany Paris i Picasso taorian'i 1904 ary nanorina namana tamin'ireo mpanoratra, toa an'i Gertrude Stein sy Max Jacob. I Picasso koa dia nanatri-maso ny lazan'ny Paul Gauguin nalaza fony izy tany Paris ary ny Picasso dia voatariky ny asany.
Miaraka amin'i Georges Braque, Picasso dia nanao ny asan'ny "Cubist" sary hosodoko, izay nahitana sary an-tsary ny sokajy madinika. Naka sary sokitra tamin'ny fomba vaovao i Picasso, ary nampiasa karazana voankazo samihafa mba hamoronana rindrankajy. Picasso koa dia nandray anjara tamin'ny famolavolana napetraka, niasa ho an'ny Ballets Russes any Roma. Nirotsaka an-tsehatra tao amin'ny fampirantiana tao amin'ny Louvre, any Paris, ny asany nalaza Picasso, izay nankalaza ny taonan'ny 90 izy, tamin'ny 1971. Miaraka amin'ity tranga ity, Picasso no mpanakanto mpanafatra voalohany nanao asa niseho tao amin'ny Louvre. Nodimandry tany Frantsa i Picasso ny volana Aprily 8, 1973.
Talenta taloha: Alexandra Nechita amin'ny maha-mpanakanto mpanakanto sy "Petite Picasso"
Valo taona taorian'ny nahafatesan'i Picasso, tamin'ny volana Aogositra 27, 1985, dia teraka tany Romania i Alexandra Nechita. Ny rainy Alexandra, Niko, indrisy fa tsy nanatrika ny fahaterahan'ny zanany vavy. Niko nandao an'i Romania ny Kominista Romania mba hitady hoavy tsara kokoa ho an'ny fianakaviany any Etazonia, fony Viorica vadiny bevohoka enim-bolana niaraka tamin'i Alexandra. Tsy hahita ny vadiny sy ny zanakavavy vaovao i Niki mandra-pahatongan'ny 1987, rehefa tafangona tany Los Angeles izy ireo.
Tahaka an'i Picasso, nampiseho talenta ara-javakanto i Alexandra ho zaza kely. Raha ny marina dia nanomboka nanao ny asany i Alexandra raha vantany vao avelany hanao izany ny rafi-pandrefesana. Nanjary niboridana i Alexandra tamin'ny bokiny fanangonam-bokatra, izay niahy ny ray aman-dreniny, satria toa tsy liana amin'ny zavatra mahazatra ataon'ireo ankizivavy kely izy, toy ny milalao sy miala amin'ny tady. Ny penina sy ny ranomainty nosoratany dia vita tamin'ny roa taona.
Nisy fandinihana tena nahagaga nataon'ny ray aman-dreniny, tamin'izy efa-taona i Alexandra. Alexandra dia nanao sarina tarehimarika abstract misy endrika roa sy maso efatra, araka ny hita eo amin'ny zava-kanton'i Picasso. Alexandra dia nanangana haingana ireo fanangonana sanganasa tany am-boalohany. Tamin'ny valo taona, ny fampirantiana zavakanto voalohany nataon'i Alexandra dia notontosaina tao amin'ny tranombokim-panjakana tany Los Angeles tamin'ny 1 aprily 1994. Tamin'ny hetsika synchronistic an-tsary, tamin'ny andro nanatontosany ny fampirantiany voalohany dia hitany koa ny kanton'i Picasso ho an'ny sambany tao amin'ny tranombakoky ny kanto any Los Angeles County.
Alexandra dia tia ny fahalalaham-pitenenana hitany tao amin'ny zavakanto Picasso, tsy voafehy amin'ny lalàna. Ny asan'i Alexandra dia nandroso haingana avy amin'io fotoana io. Araka ny voalaza ao amin'ny tranonkalany:
"Nisarika ny sain'ireo mpitsikera sy ny haino aman-jery izy izay nanomboka nitantara izao tontolo izao tsy dia fahita firy momba ny zaza - mpanakanto iray izay namolavola sary sy loko, mpanakanto iray izay namorona tenim-pahalalana manokana avy aminy, tao anaty lyric, tarehimarika cubanista, sary hoso-doko iray, vao tsy ela izay dia nanjary sivy taona. "
Raha ny marina dia niantso azy hoe "The Petite Picasso" ny gazety. Tamin'ny taona 1999, tamin'ny faha-efatra ambin'ny folo taona, Alexandra dia voafidy hitarika ny Global Arts Initiative, izay misy firenena zato mahery, notohanan'ny federasiona iraisam-pirenena. Nandritra ny diany mbola vao nipoitra, Alexandra dia vahiny tamina fandaharana fahitalavitra marobe tany Etazonia, anisan'izany ny CBS Sunday Morning, NBC's Today, The Rosie O'Donnell Show, NBC Nightly News miaraka amin'i Tom Brokaw sy The Oprah Winfrey Show.
Ny endriky ny fiainana taloha: ny Guernica Picasso sy ny tantaran'i Alexandra's Past Life
Tany am-piandohan'ny 2006, niezaka nifandray tamin'i Alexandra aho tamin'ny fampiasana ny vaovao nomena tao amin'ny tranonkalany. Mbola zaza 20 ihany izy tamin'io fotoana io. Nifandray tamin'ny reniko Viorica aho, izay nisokatra tamin'ny vatana vaovao indray.
taorian'ny ateraka indray nivoaka tamin'ny 2006, nihaona tamin'i Viorica sy ny zanany vavy aho tamin'ny fampirantiana zava-kanto izay notanterahin'i Alexandra tany Las Vegas. Ny ankamaroan'ireo hosodoko menaka dia $ 100,000 ny vidiny. Alexandra dia naneho ihany koa ireo zavakanto namboarina tamin'ny vera sy media hafa. Ny ivon'ny fampiratiana dia sarivongana vy metatra 20 metatra, Tànana sy voromailala, izay aseho ankavanana. Niasa tamin'ny haino aman-jery marobe ihany koa i Picasso ary namorona sarivongana goavambe toa ny sary sokitra tsy misy soratra ao amin'ny Daley Plaza any Chicago, ilay vorona toa tsangambato aseho etsy ambony Tànana sy voromailala.
Alexandra ny Andron'ny volana septambra 11 fitaratra an'i Picasso Guernica
Amin'ity tranga ity, ny mpitantana an'i Alexandra, Ben Valenty, izay naneho azy hatramin'ny fahazazana, dia tena nientanentana tokoa hahazo ny dika mitovy ateraka indray, izay ahitana ny trangan'i Pablo Picasso | Alexandra Nechita. Nizara tamiko izy fa i Picasso tamin'ny fahafatesany dia nilaza fa hiteraka zazakely ny talentany. Tsapako fa i Ben mihitsy no nanontany tena raha i Alexandra io zaza io. Avy eo dia nomeny ahy ny dika mitovy amin'ilay boky navoakany vao haingana, nitondra ny lohateny Ny tanana sy ny voromailala: Ny zavakanto Alexandra Nechita.
Rehefa namaky ity boky ity aho, dia nahatakatra bebe kokoa ny momba izany. Tao anatiny dia nahita sarin'ny asa nataony aho Ny Andron'ny volana Septambra 11, omena etsy ambony.
Ity dia sary hoso-doko lehibe iray amin'ny haben'ny rindrina. Tsy ny habeny fotsiny, fa ny votoatiny, dia tahaka ny sary nalaina tamin'ny Picasso Guernica. Mankasitraka ny haben'ny Ny andron'ny septambra 11, jereo ny ilany havia amin'ilay sary hosodoko ary ho hitanao eo i Alexandra mijoro eo anoloan'ny lamba. Ity sary hosodoko ity dia tena dikan-teny ankehitriny Guernica izay aseho etsy ambany.
Tahaka ny Guernica dia nanasongadina ny horohorontany tao amin'ny tanàna Espaniola, nialokaloka tamin'ny bombardements, Ny andron'ny septambra 11 dia nahatratra ny horohorontany tamin'ny fandravana ny World Trade Center. Ireo sary hosodoko rehetra dia mampiseho ny olombelona amin'ny sandry mihorohoro. Picasso dia nametraka biby fiompy tao amin'ny sary hosodoko ary naneho ny fanafoanana azy ireo, raha nampiasa voromailala kosa i Alexandra mba hanehoana ireo tra-boina tamin'ny tilikambo, izay nivezivezy nankany an-danitra. Mazava ho azy fa afaka manoro hevitra ny olona fa Alexandra fotsiny dia nahazo tsindrimandry Guernica, saingy tsarovy fa nanomboka nanao an'i Picasso toy ny zavakanto izy fony izy efa-taona monja, talohan'ny nipetrahany tamin'ny sehatry ny zavakanto.
Ny sary hosodoko Nechita iray hafa dia manan-danja Life Theory, izay manasongadina ny lohany mitaingina hita ao Guernica, izay tanjona malaza indrindra sy fantatra Guernica. Ao amin'ny sary hoso-doko, i Alexandra dia nanome ity zana-tsipìkany vavy ity ary eo amin'ny zoro havanana amin'ny sary hoso-doko, marika marika mena. Amin'ny fampiasana ny iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ny Picasso sy ny lohatenin'ny sary Life Theory, hita fa mieritreritra i Alexandra amin'ny fanontaniana hoe nalevina tao aminy i Picasso.
Fiainana taloha momba ny fiainana
Raha toa ny tranga vao teraka indray ao Pablo Picasso | Alexandra Nechita dia ekena, misaintsaina ny fomba nanehoana an'ireny fanahy ireny ho toy ny fampiatratrarana ny fivoarany mandritra ny androm-piainany roa. I Picasso sy Alexandra dia samy naka voromailala ho toy ny zazakely ary efa nahay ny saina nandritra ny taona maha-zatovo azy ireo, lasa mpanakanto fanta-daza manerantany teo amin'ny fiainany.
Toy izany koa ny famerimberenana ny lamina amin'ny tranga Paul Gaugin | Peter Teekamp. Paul Gauguin sy Peter Teekamp, ​​tovolahy, dia samy lasa mpizahatany eran'izao tontolo izao. Avy eo dia niroso tamin'ny asa aman-draharaha izy ireo mba hivelomana. Gauguin sy Teekamp dia samy nanomboka nandoko tamin'ny naha olon-dehibe ho fialamboly. Samy nanapa-kevitra ny hikatsaka ny kanto ho toy ny asa manontolo andro amin'ny fahamatorana izy roa. Maty i Gauguin nahantra sy tsy fantatra ary i Peter, na dia mpanakanto mahay aza, dia mbola tsy fantatra ankehitriny.
Andao hodinihintsika koa ny fomba ilazana ireo tranga roa ireo fa tena manatontosa ny zava-bita tamin'ny fiainana taloha isika. Ny Gauguin | Teekamp sketches, miaraka amin'ny soavaly, ny vehivavy ao anatin'ny faribolana, ny lehilahy ao anaty barika ary i Jesoa eo amin'ny tsipika avy any ambony, mampiseho fa namela tsy an-kijanona hamelabelatra ny fivoaran'ny mpanakanto Gauguin i Peter Teekamp, ​​saingy tamin'ny taloha kokoa.
Toy izany koa, i Alexandra dia namerina ny fivoaran'ny Picasso tamin'ny alàlan'ny fanaovana sary misimisy amin'ny endrika roa sy maso efatra amin'ny faha-efatra taonany. Picasso dia lasa mpisava lalana tamin'ny fomba fanaovana hosodoko Cubist tamin'ny 1907, fony izy 26 taona. Ny haino aman-jery dia nanamarika fa i Alexandra Nechita dia nanao hosodoko tamin'ny "fomba cubist abstract" fony izy sivy taona.
Ny tranga iray hafa dia maneho ny fomba amam-panao ny lozam-pahaizana amin'ny fahazazana mandritra ny fahazazana amin'ny andro iray ho an'ny hafa dia ny The Trangan-javatra momba ny Reikarnasionan'i Anne Frank Barbro Karlen, araka ny nasehon'i Barbro ny bokiny voalohany ao amin'ny 12.
Raha raisina io tranga io, dia asehony ireto zavatra manaraka ireto:
Fitoviana ara-batana: Ny rafitry ny taolana Alexandra Nechita dia mifanaraka amin'ny an'ny Picasso.
Fiainana Taloha: Alexandra Nichita dia mpanakanto nahagaga ankizy, toa an'i Picasso. Navoakany ny fanaon'ny Picasso tamin'ny fahazazany, miasa amin'ny haino aman-jery maro izy, toa an'i Picasso, ary amin'ny Ny andron'ny septambra 11, nanao kinova ankehitriny an'ny sary hosodoko malaza Picasso, Guernica izy. Ben Valenty, izay nisolo tena an'i Alexandra ary naseho tamin'ny sary ankavanana, dia nilaza tamiko fa Picasso, eo amin'ny fandriany dia naminavina fa hisy zaza hateraka miaraka amin'ny talentany.
Fomba fanao isan-taona: Alexandra dia nanana fampirantiana kanto voalohany tamin'ny faha valo taonany ary tamin'io andro io ihany dia nahita fampirantiana ny kanton'i Picasso izy.
Fanovana ny fiarahamonina Nasionaly sy ny fiarahamonina Ethique hatramin'ny Fahaiza-miaina Fahatongavana ho an'ny hafa: Teraka tany Espaina i Picasso ary niaina tany Eoropa, raha teratany any Romania kosa i Alexandra, monina any Etazonia.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy: Picasso dia lehilahy nivadika ho Alexandra, vehivavy.